Vavaka fitoniana feno. ? Fahamendrehana sy mpisotro toaka
Vavaka fitambarana Natao ho an'i Reinhold Niebuhr izay filozofa, teolojiana ary mpanoratra amerikana izany.
Io vavaka io izay nanjary malaza be dia be ny fehezanteny voalohany, dia niandohan'ny Ady Lehibe Faharoa na dia somary niovaova ny tantara manodidina ity vavaka ity, ny marina dia toy ny vavaka rehetra dia mahery sy mahasoa ho an'ny rehetra Ireo izay mangataka amin'ny vavaka dia mino fa homena izay angatahintsika.
Na inona na inona ny tantara marina izay nanamarika ny fiandohan'ireo teny momba ny vavaka ity, dia mino izahay fa hatramin'izao fotoana izao dia misy tombony lehibe ho an'izay mino sy mivavaka ho katolika.
Ny fitaovam-piadiana ara-panahy dia nomena antsika mba hifanaraka aminy ary tsy hiheverana fa hiasa, hivavaka ary hino fa Andriamanitra no manao ny ambiny.
1 Vavaky ny vavaka fitokisana Inona ny tanjona?
1.1 Vavaky ny fahatoniana tanteraka
1.2 Vavaka fitalahoana San Francisco de Asís
1.3 Vavaka fitoniana sy milamina
1.4 Vavaka Famaranana amin'ny alikaola: Salamo 62
Vavaky ny vavaka fitokisana Inona ny tanjona?
Ny serenity dia toe-tsaina milamina tanteraka izay mihoatra lavitra noho ny tsy tony sy tony.
Tsy afaka milaza isika fa tony na dia ao anaty ao anaty aza isika maniry ny hahita ireo fanovana izay noheverintsika fa tena misy.
Tsy tena milamin-tsaina izany fa toetran'ny fihatsarambelatsihy izay matetika no diso isika manandrana manofa izay tsy ananantsika.
Firenena ahitana fandriampahalemana sy fahatokisana tanteraka andriamanitra izay mamela antsika hanohy hino azy na dia hitantsika aza izay hitantsika. Ny fahatoniana ao amin'Andriamanitra dia mitarika antsika hino.
Tsy misy fomba fitoniana rehefa tsy mino an'Andriamanitra isika, fahatoniana feno sy marina dia avy amin'ny tanan'ny mahalala antsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny ho avy.
Vavaky ny fahatoniana tanteraka
Andriamanitra ô, omeo ahy ny fahatoniana hanaiky ireo zavatra tsy haiko, ny herim-po manova ireo zavatra azoko ovaina ary ny fahendrena hahalala ny fahasamihafana; velona iray andro indray mandeha, mifaly amin'ny fotoana iray; manaiky ny zava-tsarotra ho lalan'ny fandriampahalemana; mangataka, tahaka ny nataon'Andriamnitra, tao amin'ity tontolo feno ota ity, ary tsy araka ny itiavako azy; inoana fa hanatsara ny zava-drehetra ianao raha manaiky ny sitraponao aho; mba hahafahako ho sambatra amin'ny fiainana eto amin'ity fiainana ity ary faly be aminao miaraka amin'ny ho avy.
Araraoty ny herin'ny vavaka feno fitoniana.
Ny fahatoniana amin'izao vanim-potoana izay toa mazoto amintsika izao ny fahazotoana eo amin'ny fiainana andavanandro dia tombontsoa tokony hiatrehana ny fiarovana azy.
Mety haseho antsika amin'ny toe-javatra izay te hangalatra ny fandriampahalemana, izay manamaivana ny fo, amin'ireny tranga ireny dia misy ny vavaka manokana amin'ny fiterahana tanteraka.
Zava-dehibe ny fantatsika fa tsy manao na inona na inona ny antsasaky Andriamanitra ary mety ho izao isika izao dia tsy mahita ny fahagagana dia vita toy izany koa tsy maintsy tohizantsika ny fahatokisana an'Andriamanitra fa hainy hoe ahoana ary amin'ny fotoana inona no hamindrany ireo sombintsombiny ho tombontsoantsika.
Vavaka fitalahoana San Francisco de Asís
Tompo ô, manaova fitaovana ho anao amin'ny fiadananao aho: misy ny fankahalana, ataoko fitiavana, misy ny fandisoana heloka, mamela heloka aho, raha misy ny tsy fitovian-kevitra, mametraka firaisana, raha misy ny fahadisoana, mametraka ny fahamarinana aho, ary misy fisalasalana, napetrako ny ny finoana, izay misy famoizam-po, mametrahako, ao ny maizina, apetrako ny maivana, ary misy alahelo, napetrako fifaliana.
Ry Tompoko, enga anie mba tsy hikatsaka fatratra aho mba hampiononana, hahay hahatakatra, tiana ho tia.
Satria ny fanomezana dia raisina, fanadinoana no ahitana, voavela ny famelan-keloka ary miakatra ho amin'ny fiainana mandrakizay.
Saint Francis of Assisi dia iray amin'ireo olo-masina izay tian'ny fiangonana katolika satria fitaovana avy amin'Andriamanitra io mba hitahiana ny fiainana sy ny fianakaviana iray manontolo.
Malaza ho manam-pahaizana izy amin'ny tranga sarotra, amin'ireo izay mangalatra ny fiadanantsika. Nankatò an-tsakany sy an-davany ny fandehany teto an-tany, tam-po foana sy voatohina ny feon'Andriamanitra.
Angatahina izy, ankoatra ny zavatra hafa, mba hameno antsika fahatoniana, hanome antsika ny fahitana mahita ny zava-misy sy manohy ny fitokisana, ny hanohizantsika mino ny fahagagana.
Mijanona ho milamina sy milamina tanteraka satria misy olona mahery izay mikarakara ahy sy ny fianakaviako ary ny namako amin'ny fotoana rehetra.
Izany no tokony hivavahantsika, ny vavaka ataontsika isan'andro ary tsy maninona na inona na inona zava-dratsy rehetra, dia aleo mitazona ny fo tsy mihena ary hino fa manampy antsika amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra.
Vavaka fitoniana sy milamina
Ilay Ray any an-danitra, Andriamanitra be fitiavana sy tsara fanahy, ilay Raintsika tsara fanahy, ny famindram-ponao tsy manam-petra, Tompoko miaraka aminao aho manana ny zavatra rehetra ilaiko, miaraka aminao aho amin'ny tanjako ary mahatsiaro miaraka am-po aho, koa miangavy anao aho mba ho tompon'ny tompontsika ny tokantrano, ny fiainantsika sy ny fontsika, mitoetra sy manjaka ao amin'ny Ray Masina ao amintsika ary mitony ny fihetseham-pontsika sy ny fanahintsika.
Izaho ……. Amin'ny fahatokiana tanteraka anao sy amin'ny fahamendrehan'ny zaza iray izay tia ny Rainy dia miangavy anao aho mba hanome ny sitrakao sy ny fitahiany ho anay, tototry ny fahatoniana sy fiadanam-po, hitandrina ny nofinay, hiaraka aminay amin'ny alina, hijery ny dianay , tariho izahay mandritra ny andro, omeo fahasalamana, fiadanam-po, fitiavana, firaisana, fifaliana, ampahafantaro anay ny fomba tsy fivadihana sy fifankatiavana amin'ny tsirairay, fa mitoetra ho tafaray amin'ny fitiavana sy ny filokana ary ao amin'ity trano ity ny fiadanam-po sy fifaliana tadiavinay
Avelao i Maria Virjiny malala, renin'ny Zanakao be malalanao sy ilay Reninay be fitiavana, mba hamonotra antsika amin'ny Cloak Masina Miaro azy ary ampio izahay rehefa misy fahasamihafana sy mampalahelo antsika, avelao ny tànana mampihavana sy malemy fanahy hisintona antsika hiala. dinika sy fifanoherana, avelao hijanona ato aminay izy ary izy no tokony ho fialofana ho antsika manoloana ny zava-tsarotra.
Alefaso Tompoko eto amin'ity trano ity ny anjelin'ny fiadanana mba hitondra antsika fahasambarana sy firindrana ka mamindra ny fandriam-pahalemana izy irery izay fantatrao ny manome anay sy manampy anay amin'ny vesatra sy ny tsy fahatokisanay azy, ka, eo afovoan'ny rivo-doza sy ny olana, dia afaka mahazo ny fahatakarana ao am-po sy eritreritra isika.
Tompo ô, zahao izahay amin'ny fahafinaretana ary omeo anay ny fankasitrahanao sy ny fitahianao, alefaso aminay amin'izao fotoana mampahory izao ary ataovy ny olana sy ny tsy fitovian-tsika lalandava, indrindra indrindra aho mangataka ny fahalalanao tsy manam-petra.
(mangataha am-panetren-tena sy matoky izay tadiavinao)
Aza ilaozanao mihitsy izahay satria mila anao izahay, fa ny fitiavanao mahasoa, ny fahamarinanao ary ny herinao no miaraka amintsika ary manome fitoniana isaky ny fotoana; Enga anie ny Fanatrehan'ny fiainanao hitarika antsika sy hanoro anay ny lalana tsara indrindra, enga anie ny firindranao hanova antsika amin'ny anatiny ka hahatonga antsika ho tsara kokoa amin'ny hafa, ampio izahay Tompo, fa ny fotoana rehetra iainantsika, ny fitiavana sy ny finoantsika dia matanjaka sy lehibe kokoa ary Omeo izay zavatra ilainay isan-tory isan'alina rehefa matory isika dia mahalala ny misaotra anao amin'ny zavatra rehetra omenao anay.
Mamelà ny helokay ary avelao izahay hanohy hiaina amin'ny fandriam-pahalemana masina, enga anie ny loharanom-pitiavanao amin'ny fiarovana anay, enga anie ny fiarovana ny fametrahanao ho anao tsy ho very maina ary ny fahatokisanay hatrany hatrany aminao.
Misaotra ny Ray any An-danitra.
Mivavaha am-bavaka sy milamina miaraka amin'ny finoana.
Mikarakara antsika hatrany Andriamanitra, izany no antony tokony hatokisantsika fa manao ny sitrapony amin'ny fiainantsika mandrakariva izy.
Tsy maintsy manahy ny fahatsiarovana fihavanana foana isika, hevitra izay miteraka fahatoniana sy fahatokisana.
Ny saina dia sehatra mpiady izay matetika hianjera matetika na dia miezaka ny hiseho amin'ny fomba hafa isika. Tsy atao ambanin-javatra ny raharaha ary tsy hanao na inona na inona satria matoky azy isika.
Izy io dia mihetsika miaraka am-pahatokiana tanteraka, amim-pahatokiana ary milamina na dia mahita zavatra hafa fantatro aza Andriamanitra, ilay Ray Mpamorona dia manao zavatra ankasitrahako amin'ny fotoana rehetra satria tia ahy izy.
Vavaka Famaranana amin'ny alikaola: Salamo 62
01 Avy amin'ny choirmaster. Ao amin'ny fomba nataon'i Iedutún. Salamo nataon'i Davida.
02 Andriamanitra irery no mampitoetra ny fanahiko, satria avy aminy ny famonjena ahy;
03 Izy irery no vatolampiko sy famonjena ahy, fiarovana mafy ho ahy: tsy hiteny aho.
04 Mandra-pahoviana no hiara-mandry amin'ny olona iray ianareo rehetra, hamiravira azy toy ny rindrina manjavozavo na rindrina manimba?
05 Izy ireo dia mieritreritra fotsiny hoe handroaka ahy avy any an-tampoko, ary mankasitraka ny lainga izy ireo: mitso-drano amin'ny vavany izy ireo ary manozona ny fony.
06 Andriamanitra ô, ry fanahiko, fa Izy no fanantenako;
07 Izy irery no vatolampiko sy famonjena ahy, fiarovana mafy ho ahy: tsy hiteny aho.
08 Avy amin'Andriamanitra ny famonjena sy ny voninahitro, Izy no vatolampiko mafy, Andriamanitra fialofako.
09 Ry olony, matokia Azy, avelao handeha eo alohany ny fony, fa Andriamanitra no aro ho antsika.
10 Ny fon'ny olona dia tsy fofonaina fotsiny, endrika ny olona ambony: ny halavany rehetra dia ho maivana kokoa noho ny fofonaina.
11 Aza matoky ny fampahoriana, aza mampiditra lesoka amin'ny halatra; ary na dia mitombo aza ny harenao, dia aza omena azy ny fo.
12 Andriamanitra dia nilaza zavatra iray, ary zavatra roa no henoko: «Manana hery Andriamanitra
13 Ary ny Tompo manana fahasoavana; fa ny tsirairay avy no nandoa araka ny asany ».
Mampitaha ny fahatoniana mahay mametraka milamina ao afovoan'ny rivo-doza, amin'ny finoana sy fahalalana fa mikarakara antsika Andriamanitra.
Amin'ny fotoan'ny famoizam-po dia zava-dehibe ny hitadidantsika io vavaka io ary ahafahantsika mampihatra azy amin'ny fotoana rehetra.
Tsy mitaky toerana na tontolo iainana hivavaka sy ho kely kokoa rehefa manana ny aintsika na ny fo tsy reraka isika.
Amin'ireny vanimpotoana izay heverintsika fa ho very ny fifehezana, ny vavaka iray dia mety hanova ny fizotran'ny tantara ho tombontsoantsika, tokony hino fotsiny ianao.
Aza adino ny manana finoana.
Minoa an'Andriamanitra sy ny heriny rehetra.
Minoa ny ny hery manomboka amin'ny vavaka ka hatramin'ny fahatoniana tanteraka. Amin'izay ihany izy vao handresy ny fotoan-tsarotra.